ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏ ဆန်းကြယ်မှု | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
98 ဗွီဒီယိုများ ကြည့်ရှုသူ ၁ ဦး နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်မွမ်းမံချက်:
ကယ်တင်ခြင်းနှင့် အပြည့်အဝ ကယ်တင်ခြင်း
အသင်းတော်များ ပျက်စီးရခြင်း၏ အရင်းအမြစ်များကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း
ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို လူသား၏လုပ်ဆောင်မှုမှ ခွဲထုတ်ခြင်း၏ အမှန်တရား
စစ်မှန်သည့်ခရစ်တော်နှင့် မှားယွင်းသည့် ခရစ်တော်တို့ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်း
တရားစီရင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အိမ်တော်မှ စတင်သည်။
သခင်နောက်တစ်ကြိမ် ကြွလာတဲ့အခါမှာ လူသားဆီကို ဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာမလဲ။
ဖာရိရှဲတို့၏ အနှစ်သာရကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် နာခံသောသူဖြစ်လာပြီး သူ၏ ကယ်တင်ခြင်း ခံရရန် နည်းလမ်း
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အမှုအရာများကို စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့် သခင့်အတွက် မိမိကိုယ်ကိုယ် အသုံးခံခြင်းတို့သည် အမှန်တကယ် ဘုရားသခင်ကို နာခံခြင်းဖြစ်ပါသလား။
(ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ) ဘုရားသခင်သည် ဂိမ်းစွဲလမ်းခြင်းများ၏ အန္တရာယ်မှ တစ်ခုတည်းသော ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ -အပိုင်း (၃)
(ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ) အဘယ်ကြောင့် ကမ္ဘာလောကသည် အလွန်မှောင်မိုက်ပြီး ဆိုးယုတ်ရပါသနည်း။ - အပိုင်း (၂)
(ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ) ဘုရားသခင်အပေါ် မှီခိုခြင်းဖြင့် ကလေးများကို ဂိမ်းစွဲလမ်းခြင်းများမှ လွတ်မြောက်အောင် ကူညီရမည့်နည်းလမ်း -အပိုင်း (၁)
(အိပ်မက်မှ နိုးထလာခြင်း) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုမျာ - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်း
ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ - ဘုရားသခင်၏ ခြေလှမ်းများကို လိုက်လျှောက်သောသူတို့သာ ထာဝရအသက်လမ်းကို ရရှိနိုင်သည် - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၅
ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ - ဘုရားသခင်နဲ့ သမ္မာကျမ်းစားအကြားက ဆက်နွယ်မှုကဘာလဲ။ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၄
ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ - "သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းဟုတ်မဟုတ်" နှင့်ပတ်သက်သမျှ ဆွေးနွေးခြင်း - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၃
ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ - ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော်နဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးဟာ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ရှိပါသလား။ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၂
ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ - သခင်၏ ဒုတိယအကြိမ် ကြွလာခြင်း နှင့် ပတ်သက်သော နှုတ်ကပတ်တော်များကို နားထောင်ပြီး၊ အသက်တာ အထောက်အပံ့ကို ရယူပါ။- ရုပ်ရှင်ကလစ် ၁
မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ် - ဇာတ်လမ်းတို (၁)- သခင် ပြန်လာတဲ့အခါ၊ လူတွေဆီ ဘယ်လိုပေါ်ထွန်းမှာလဲ
မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ် - ဇာတ်လမ်းတို (၃) ခရစ်တော်ရဲ့သာမန်လူ့သဘာဝနဲ့ အကျင့်ပျက်လူသားတွေရဲ့လူ့သဘာ၀ကြား ခြားနားမှု
မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ် - ဇာတ်လမ်းတို (၆) သခင်ယေရှုဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လား၊ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လား
(အိပ်မက်မှ နိုးထလာခြင်း) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုမျာ - ဘုရားသခင်က နောက်ဆုံးသောကာလမှာ လူသားတွေကို စီရင်ဆေးကြောပေးဖို့ သမ္မာတရားကို အသုံးပြုတယ်
(အိပ်မက်မှ နိုးထလာခြင်း) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုမျာ - သန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ ဘယ်လူသားမှ ဘုရားသခင်ရဲ့ နိုင်ငံတော်ဆီ ဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူး (အိပ်မက်မှ နိုးထလာခြင်း) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုမျာ - ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိသလား၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိသလား ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ- လှည့်ဖြားတတ်မှုကို ဖြေရှင်းပြီး ဘုရားသခင်ထံသို့ ဝမ်းမြောက်မှု ဆောင်ကျဉ်းသည့် ရိုးသားသည့်လူတစ်ဦးဖြစ်လာရန် နည်းလမ်း- အပိုင်း (၂) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ- ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည် ရိုးသားစွာ ပြုမူပြီး ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ရရှိသည်- အပိုင်း (၁) Myanmar Christian Movie Clip (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၂ - ဘုရားကျောင်း ပြိုလဲပြီးနောက်) အပိုင်း (၂) Myanmar Christian Movie Clip (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၂ - ဘုရားကျောင်း ပြိုလဲပြီးနောက်) အပိုင်း (၁) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) သခင်ယေရှုပြန်လာမည့်ပရောဖက်ပြုချက်ဟာ ဘယ်လိုမျိုးမှန်လာမှာလဲ - အပိုင်း (၁) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) နောက်ဆုံးသောကာလမှ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်းသည် လူသားအတွက် ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည် - အပိုင်း (၅) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) အပြစ်တွေကို လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းက တကယ်ပဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားဖို့လက်မှတ်လား - အပိုင်း (၄) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ နှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာ သမ္မာကျမ်းစာအပြင် မရှိတော့ဘူးလား - အပိုင်း (၃) (ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) သခင်ယေရှုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသေချာနိုင်မလဲ - အပိုင်း (၂) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ဘာသာရေးစက်ဝိုင်းတို့၏ ရှုတ်ချပြစ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်ဟာ စစ်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပေလား။ အပိုင်း (၂) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းသည် မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ရသနည်း။ - အပိုင်း (၆) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းဟာ သခင့်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ညီမျှလေသလား။ - အပိုင်း (၄) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) သခင့်အတွက် ဒုက္ခသုခခံ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ သခင့်အပေါ် ယုံကြည်မှု၏ လက်တွေ့ဘဝပေလား။ - အပိုင်း (၅) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်နှင့် ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကြောင့် ဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မည်သို့ထူးခြားစေသနည်း။ - အပိုင်း (၃) (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) မင်းအာဏာစက်ရှိသူတို့အား လိုက်နာခြင်းဟာ ဘုရားသခင်ကို လိုက်နာခြင်းနှင့် အမှန်တကယ်ပဲ တူညီသလား။ - အပိုင်း (၁) (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင် ပြင်ဆင်ထားသော နေရာသည် အဘယ်တွင်နည်း (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းကင်မှာလော မြေကြီးပေါ်မှာလော (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) သခင်ကြွလာသည့်အခါ မည်သူသည် ဦးစွာပထမ ချီဆောင်ခံရလိမ့်မည်နည်း (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သော နက်နဲမှုကို သင် နားလည်ပါသလော (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) ထို့ကြောင့် ဤသည်မှာ သခင် ပြန်ကြွလာပုံဖြစ်သည် Myanmar Movie (နားခိုရာအိမ် ဘယ်မှာလဲ) ဘုရားသခင်သာ လူသားမျိုးနွယ်ကို ကယ်တင်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို နာကျင်မှုမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သည် အပိုင်း (၁) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင်က တံခါးလာခေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ရဲ့အသံတော်ကို သင် မှတ်မိနိုင်ပါသလား (၂) (အပိုင်း၅/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင်က တံခါးလာခေါက်နေပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ရဲ့အသံတော်ကို သင် မှတ်မိနိုင်ပါသလား (၁) (အပိုင်း၄/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင် ပြန်လည်ကြွရောက်ပြီးမိန့်ဆိုသည်ကို ကြားရတဲ့အတွက် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာ နိုးထလာကြပါပြီ။ (အပိုင်း၃/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင် ကြွလာခြင်းကိုကြိုဆိုရာမှာ အလွယ်တကူအလုပ်တတ်ဆုံးအမှားတွေက ဘာတွေလဲ (အပိုင်း၂/၅) တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း - ကိုယ်တော်ရှင် ကြွချီလာခြင်းကို ကြိုဆိုဖို့ အရေးကြီးဆုံးလက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမှာက ဘာလဲ (အပိုင်း၁/၅) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများသည် အဘယ်ကြောင့် အရှေ့အရပ်မှ လျှပ်ပြက်ခြင်းကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကြသနည်း - အပိုင်း (၇) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) ဘာသာရေးဖာရိရှဲတို့၏ အနှစ်သာရကို မည်သို့ ချင့်ချိန်ရမည့် နည်းလမ်း - အပိုင်း (၁) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီသည် အဘယ်ကြောင့် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော်ကို ညဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြသနည် - အပိုင်း (၆) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) စာတန်၏ လွှမ်းမိုးမှုမှ လူကို ဘုရားသခင် ကယ်တင်ပုံ - အပိုင်း (၅) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ဘာသာရေးလောကအတွင်းတွင် သခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ပါသလား - အပိုင်း (၄) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား ယုံကြည်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသလား - အပိုင်း (၃) (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ် ရှင်းပြချက်များ၏ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင် - အပိုင်း (၂) (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) ဘုရားသခင်ဟာ အမှုတော်အတွက် လူ့ဇာတိခံယူဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ခြင်း - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၆ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) ခရစ်တော်ဟာ သမ္မာတရား၊ လမ်းခရီးနဲ့အသက်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ - ဇာတ်လမ်းတို ၅ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) လူ့ဇာတိခံတဲ့ဘုရားသခင်ကသာ နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တရားစီရင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် - ဇာတ်လမ်းတို ၄ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) ဘုရားသခင် လူ့ဇာတိခံခြင်း၏ နက်နဲမှု - ဇာတ်လမ်းတို ၃ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) သခင်ဟာ ပြန်ပြီးကြွလာတဲ့အခါ၊ လူတွေကို အသိပေးဖော်ပြမှာလား - ဇာတ်လမ်းတို ၂ (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏နက်နဲသောအရာ) လူသားကြွရောက်လာခြင်း၏ နက်နဲမှု - ဇာတ်လမ်းတို ၁ ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၁ - ခြေချင်းများကိုစွန့်ပစ်ပြီး သမ္မာတရားလမ်းကို လေ့လာပါ ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၃- သမ္မာကျမ်းစာကို ကျော်လွန်သွားပါ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ စားပွဲကို သခင်နှင့်အတူတက်ရောက်ပါ ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၄ - ဘာသာရေးဖာရိရှဲတို့၏ ချည်နှောင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ပြီး ဘုရားသခင်ဆီသို့ ဦးလှည့်ပါ ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၂ - သမ္မာကျမ်းစာထဲက ရှိရှိသမျှဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲလား။ (ပြောင်းလဲခြင်းအခါသမယ) - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆီ ဝင်ခွင့်ရမယ့် တစ်ခုတည်းသောလမ်း - (အပိုင်း ၂/၂) (ပြောင်းလဲခြင်းအခါသမယ) - ပညာရှိသောသတို့သမီးတွေဟာ ဘယ်လိုချီဆောင်ခြင်းခံရမှာလဲ - (အပိုင်း ၁/၂) စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၇ - အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် သူ၏ လျှို့ဝှက်နက်နဲသော နှစ်ပေါင်း ၆ဝဝဝ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို ဖော်ထုတ်ပြခဲ့သည် စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၆ - ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မလဲ? (၂) စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၅ - ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ခွဲခြားနိုင်မလဲ? (၁) စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၄ - သခင် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို ဆန့်ကျင်သူများ၏ အဆုံးသတ် စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၃ - ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို ဆောင်သောသူသာလျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ကို၀င်ရမည်။ စောင့်လို့နေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၂ - ပညာရှိ သတို့သမီးများဟာ မှန်ကန်တဲ့ ခရစ်တော်နဲ့ ခရစ်တော်အတုအယောင် တွေကို သေချာခွဲခြားနိုင်တယ်။ စောင့်လိုနေ - ရုပ်ရှင်ကလစ် ၁ - သခင် ဒုတိယအကြိမ်ပြန် ကြွလာတာကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို သတိနဲ့ စောင့် ကြည့်ခြင်း စောင့်နေခြင်း ပြုမလဲ။ အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း - အပိုင်း ၅ - သုံးပါးတစ်ဆူသင်းအုပ်ဆရာ၏ အယူအဆများအပေါ် ခရစ်ယာန်တစ်ယောက်၏ အံ့သြဖွယ်ချေပချက် အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုခြင်း - အပိုင်း ၄ - အုပ်ချုပ်နေသည့် အစိုးရအား နာခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်အား နာခံခြင်းနှင့် မတူညီပေ Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုး (၁) ဘာသာရေးလောကသည် ဗာဗုလုန်မြို့တော်ကြီးအဖြစ် ဆုတ်ယုတ်လေပြီ Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (၂) သူတော်ကြောင်ဖာရိရှဲတို့သည် အဘယ်ကြောင့် အမင်္ဂလာ ရှိကြသနည်း။ Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရွင္ဇာတ္လမ်းတို (၃) ဖာရိရှဲတို့ ဘုရားသခင်အပေါ်ဆန်ကျင်ခြင်း၏ အခြေအမြစ်မှာ အဘယ်နည်း။ Brighten Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) ရုပ်ရွင္ဇာတ္လမ်းတို (၄) သမ္မာကျမ်းစာကို ရှင်းလင်းခြင်းသည် ဘုရားသခင်အတွက် ဂုဏ်တင်ချီးမြှောက်ပြီး သက်သေခံခြင်းနှင့် တူညီပါသလား။ Clip5နောက်ဆုံးသောကာလတွင် တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကြား ဆက်နွယ်မှု ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကြားရှိ ဆက်နွယ်ပုံသည် အတိအကျ မည်သို့ဖြစ်သနည်း (နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ) ဇာတ်လမ်းတို ၃ သင်သည် ရှင်ပေါလုကို အမှန်တကယ် နားလည်ပါသလား နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်သနည်း။ (အပိုင်း၂/၅) Movie Clip 1 ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်း ငြင်းခုံဆွေးနွေးခြင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတိုး (၁) သခင်သည် ကားစင်အတင်ခံရသည့်အခါတွင် ကယ်တင်ခြင်းအမှု ပြီးဆုံးသွားပါသလား ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (၂) ခရစ်တော်သည် လူ့ဇာတိခံယူသည့် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို (၃) သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲတို့သည် သခင် ပြန်လည်ကြွလာခြင်းအပေါ် ပြုမူပုံ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ)ခရစ်တော်ရဲ့ပလ္လင်ရှေ့မှောက် တရားစီရင်ခြင်းကို တွေ့ကြုံရခြင်းရဲ့သက်သေခံချက်များ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်နဲ့ လူတွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကြား ဘယ်လိုခွဲခြားကြမှာလဲ ၃ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ဘုရားသခင်ကသာ လူတွေကို အသက်တာပေးနိုင်ပါတယ် ဇာတ္လမ်းတို ၆ ဇာတ်လမ်းတို ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ သမ္မာတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကြား ကွဲပြားခြားနားမှု (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) ဘုရားသခင်ကသာ တရားစီရင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် ၄ (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ ခရစ်တော်အတုအယောင်တွေကြား ဘယ်လိုခွဲခြားမှာလဲ (၂) (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) စစ်မှန်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ ခရစ်တော်အတုအယောင်တွေကြား ဘယ်လိုခွဲခြားမှာလဲ (၁) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက် - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရရန် မည်သို့လျှောက်လှမ်းမည်နည်း(၂) (အပိုင်း2/5) ရုပ်ရှင် (နောက်ဆုံးသောကာလ ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းအမှုတော်နှင့်သခင်ယေရှု၏အမှုတော် မည်သို့ကွာခြားသနည်း) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက် - ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်ခွင့်ရရန် မည်သို့လျှောက်လှမ်းမည်နည်း(၁) (အပိုင်း1/5) Myanmar Christian Movie (ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် မည်သည့်အရပ်၌ - ကျိန်းသေတည်ရှိသနည်း) Myanmar Movie (ခရစ်တော်၏ပလ္လင်တော်ရှေ့၌ စီရင်ခြင်းအမှုတော်နှင့် - ထာဝရအသက်ဆိုင်ရာ သက်သေခံဒေသနာများ)
ဆုတောင်းနည်း ဘုရားသခင် ဒုတိယအကြိမ် ကြွတော်မှုခြင်း
ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းကို ရှာဖွေဖို့ လူမျိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်သော အယူအဆများကို ထိုးဖောက်ပါ
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် သိရှိခြင် | Myanmar Christian Testimony Video
သေရာပါ အမာရွတ် | Myanmar Gospel Movie Trailer 2020
(ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများသည် အဘယ်ကြောင့် အရှေ့အရပ်မှ လျှပ်ပြက်ခြင်းကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကြသနည်း - အပိုင်း (၇)